Chicken Stew | Colourful Recipes
Fish Cake →
Chicken – 4.85 lb
All purpose flour –2tbs
Mixed vegetable –2cups
ငရုတ်ကောင်းစေ့ – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ထောပတ် – ၁ အောင်စ
Bay Leaves ( ကရဝေးရွက် )
အရင်ဆုံး … ကြက်သားများကို ဆား – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ( ၂ ) ဇွန်းဖြင့် နှယ်ပါ။
ထောပတ် – ၁ အောင်စ ကို အိုးထဲမှာ မီးမြေးမြေး အနေအထားဖြင့် အပူပေးပါ။
ကရဝေးရွက် ( ၃ ရွက် သို့မဟုတ် ၅ ရွက် ) နှင့် ငရုတ်ကောင်းစေ့ – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တ၀က် ထည့်ပီး ထောပတ် ဆီ သတ်ပါ။
ကြိတ်ထားသော ( ထောင်းထားသော ) ကြက်သွန်နီ တဥ ကို ထည့် ဆီသတ်ပါ။
ဂျုံမှုန့် – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ( ၂ ) ဇွန်းထည့် .. ခပ်ပြစ်ပြစ်လေး မွှေပီးနောက်
ကြက်သားများကို ထည့်မွှေ …
နှံစပ်နေအောင် မွှေပီးပါက ..
Mixed Vegetable –2cups ထည့် မွှေ …
ရေ ကို 1 cup ထည့်ပီး
Pressure Cooker – 20 Minutes ( Medium Heat ) ဖြင့် ချက်ပါ။
ပေါင်မုန့်နှင့် တွဲဖက် စားရင် ပိုစားကောင်းပါသည်။
By Thet Nandar • Posted in Chicken - Stew, Chicken Recipe, Cooking Ingredients, Price - Cooking Ingredients, Thiriyatanar's Special	• Tagged ကြက်သားစတူး, Chicken Stew, colourful recipes blog, food
One comment on “Chicken Stew”
August 22, 2012 @ 12:55 am
This isaperfect chicken stew to make during the in-between time of summer season and fall season. Thank you. Can’t wait to try something else. YUMMY
LeaveaReply to Ma Naing Cancel reply